Kọmputa nhicha | December 2019
Isi Kọmputa nhicha
Esi kpochapụ cache na kuki na ihe nchọgharị ahụ?
Maka ọtụtụ ndị na-enweghị ọrụ, ọ nwere ihe isi ike na ọrụ dị mfe dị ka ikpochapụ cache na kuki na ihe nchọgharị ahụ. N'ikpeazụ, a ghaghị ime ya mgbe ị na-ekpochapụ ụdị adware, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na ịchọrọ ịgbatị nchọgharị na akụkọ ntolite dị ọcha. Tụlee ihe atụ niile nke atọ kachasị nchọgharị: Chrome, Firefox, Opera.
Ọ bụrụ na kọmputa ahụ na-akwụsị ngwa ngwa ... Ntụziaka mmepe PC
Ezi ụbọchị niile. Agaghị m echefu ma ọ bụrụ na m na-ekwu na ọ dịghị onye ọrụ dị otú ahụ (nke nwere ahụmahụ) bụ onye na-agaghị akwụsịlata kọmputa ahụ! Mgbe nke a na - amalite ime mgbe - ọ na - adighi mma ịrụ ọrụ na kọmputa (na mgbe ụfọdụ, ọbụghị ekwe omume). Iji mee ihe n'eziokwu, ihe kpatara kọmputa ahụ nwere ike ịkụda - ọtụtụ narị, na ịchọpụta ihe ụfọdụ - adịghị mfe mgbe niile.
Otu esi achọta foto na foto di otu (ma obu yiri) na komputa gi ma wepu ohere disk
Ezi ụbọchị. Echere m na ndị ọrụ ahụ nwere ọtụtụ foto, foto, na akwụkwọ ahụ aja ezutewo eziokwu ahụ na diski na-echekwa ụdị faịlụ dị iche iche (na ọtụtụ narị ndị yiri ya). Ma ha nwere ike ịnọ ebe dị nnọọ mma! Ọ bụrụ na ịchọrọ onwe gị maka foto ndị yiri ya na ihichapụ ha, mgbe ahụ, ị ​​gaghị enwe oge na ike (karịsịa ma ọ bụrụ na nnakọta ahụ dị mma).
Usoro kachasị mma iji chọta faịlụ abụọ (yiri)
Ezi ụbọchị. Nkọwapụta bụ ihe na - enweghị ike - ọtụtụ ndị ọrụ nwere ọtụtụ akwụkwọ nke otu faịlụ ahụ na draịvụ ike ha (dịka ọmụmaatụ, foto ma ọ bụ egwu egwu). N'ezie, nke ọ bụla n'ime akwụkwọ ndị a na-ewe ohere n'elu draịvụ ike. Ma oburu na ugbua "ugbua" gi adiwo ike, enwere ike inwe uzo di otua!
https://termotools.com ig.termotools.com © Kọmputa nhicha 2019